China Plastic PITA filament maka ezinụlọ ahịhịa ụlọ ọrụ na-emepụta | Xinjia
Njirimara: ezigbo agbanwe: Jiri: BroomFiber Ogologo: 1100mmFineness: 0.20-1.80mm Ebe Mmalite: Jiangsu, China
Aha Ahịa: XINJIA
Tụkwasịnụ Ikike: 200000 Kilogram / Kilogram kwa ọnwa
Ihe nkwakọ ngwaahịa ： Pee tube, 25kg n'otu katọn aja aja
Port ： Shanghai ma ọ bụ Nanjing
Agba N'elu ahịa 'arịrịọ
Ngalaba mkpọwa Gburugburu, triangle, oghere, wdg
Cut-ogologo 25mm ka 1220mm
Mbelata Njikọ 50mm ma ọ bụ 80mm
Mbukota Pee tube
Katọn 25kg ma ọ bụ 30kg, katọn aja aja
Etiti oge 15 ụbọchị ọrụ
Kwụ .gwọ Nkwụnye ego 30% yana itule megide B / L.
N'ihi mgbatị gbagọrọ agbagọ dị mma na arụmọrụ dị mma, PET filament abụrụla ihe kachasị mma maka bristle na ịnyịnya na ngwa dị iche iche sitere na brooms ọma na agba agba. Ihe ọzọ bụ, PET filament na-eme ka arụ ọrụ dị mma nke anụ ahụ dị na oke okpomọkụ.
Ahụmahụ XINJIA nọ na-arụ ọrụ na filaments plastik kemgbe ihe karịrị afọ iri, na-aghọta otu esi efu efu na ezigbo mkpa nke onye ahịa, na-eweta azịza dị irè ma dị irè.
Usoro a haziri ahazi ma na-agbanwe agbanweAnyị pụtara obibia-enyere anyị aka izute gị chọrọ na-oge na iche price. Anyị na-emegharị maka mkpa gị ma tinye aka n'akụkụ ọ bụla na ụlọ ọrụ ahịhịa.
Tụkwasịrị Obi Onye MmekọAnyị na-enyere ndị na-emepụta ahịhịa ihe mgbaru ọsọ azụmahịa gị site n'inye eriri ndị mepụtara ọhụrụ. Dị ka ọkachamara na-emepụta filaments plastik, anyị kwenyere na naanị ụzọ anyị ga-esi rụọ ọrụ anyị bụ inye ezigbo azụmaahịa bara ezigbo uru.
Successga nke ọmaImirikiti azụmahịa anyị bụ site n'ọnụ na-ekele ndị ahịa anyị a ma ama. Anyị na-akọwa azụmaahịa na-aga nke ọma dị ka nke anyị nwere ike inyere ndị ahịa aka iwusi asọmpi na ngwaahịa ha. Anyị track-ndekọ nke ọma bụ n'ihi na-okokụre iwu. A na-emepụta eriri ọ bụla n'okpuru ndị ọrụ nwere ahụmahụ na nlekọta siri ike QC.
A ozugbo nzaghachi ga-osụk megide gị ase n'ime awa 12, zụrụ nke ọma & ahụmahụ mkpara dị njikere inye ọrụ.
Oge ọrụ: 8: 00am - 5: 00 pm, Monday ruo Saturday (UTC + 8).
Mmekọrịta azụmahịa gị na anyị ga-abụ ihe nzuzo nye ndị ọzọ.
Ezigbo ọrụ ire ahịa.
Ọkachamara ọkachamara Nọ n'ọhịa nke plastic filaments ihe karịrị afọ iri, na 12 mmepụta edoghi hụ na anyị nwere ike mezuo ahịa chọrọ nke 300 tọn kwa ọnwa.
Pụrụ ịdabere na àgwà Anyị na-enye eriri maka ọtụtụ ndị a ma ama na ndị na-emepụta broom n'ụlọ na mba ofesi, nke na-ekwu na nkwa dị mma
Ọnụahịa asọmpi Anyị price kwekọrọ na ndabere kachasị mma, napreferenke price na-awa mgbe na nnukwu.
Mbuga n'oge Anyị na-etinye onwe anyị na akpụkpọ ụkwụ nke ndị ahịa na-agba mbọ na-enye-adọ nnyefe.
Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ịhọrọ. Ma oburu na ichoro ikwu okwu na ime ihe ozo, i gha ekwusi ngwa ngwa na anyi bu ihe kachasi nma.
Osote: pa 6 filament bristles eriri